Tari-dalana Toriteny Alahady 14 mey 2017 (Alahady faha-4 manaraka ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 14 mey 2017 (Alahady faha-4 manaraka ny PASKA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Ialana tsiny fa noho ny antony izay efa nambara teo aloha dia tara ny fametrahana ny tari-dalana mahakasika ny toriteny izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 14 May 2017 ho avy izao. Indro atolotra antsika eto izany. Mirary soa tompoko.
TEXTE: JAONA 17:9–17
Tao amin’ny Jao. 1–5 dia ny fankalazana ny Zanaka teo amin’ny hazofijaliana (ampit. ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, and. 1, tonga ny ora) no nangatahan’i Jesosy. Fanomezana voninahitra (δοξάζω, to glorify) ny Ray koa izany. Fihariharian’ny voninahitry ny Ray sy ny Zanaka ny hazofijaliana satria fahatanterahana tampon’ny asany sy izay nokendreny teto amin’izao tontolo izao. Resy teo amin’ny hazofijaliana ny Ota sy ny Fahafatesana ary ny Devoly. Manana ny fiainana mandrakizay ny mino Azy. Ao amin’ny and. 10 dia ambaran’i Jesosy fa “ankalazaina eo Aminy” koa ny mpianatra (καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς), izany hoe, ny Mpianany izay nentiny niaraka Taminy teo amin’ny hazofijaliana (ampit. 12:32) ka vokatr’izany asany teo izany dia maneho ny voninahiny (Ray/Zanaka) ihany koa. Ary satria mizotra miverina mankany amin’ny Ray Izy izao (fahafatesany, fitsanganany ary fiakarany) dia mangataka (ἐρωτῶ, I ask, and. 9) amin’ny Ray mba hiarovana na hitehirizana (τήρησον [imper.aor.of τηρέω: to keep watch over, to quard] αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, and. 11) izany voninahiny ao amin’ny mpianany eto amin’izao tontolo izao izany. Fahasovana/fifaliana ho an’ny mpianany koa izany (and. 13).
Antsoin’i Jesosy hoe “Ray Masina” (πάτερ ἅγιε, and.11) Andriamanitra. Izany anarana manondro ny maha Izy Azy ny Ray izany no angatahan’i Jesosy mba hitehirizana ny mpianany. Hanana izany fahamasinana izany koa izy ireo (ampit. and. 14, 16, 17: tsy naman’izao tontolo izao ó masina). Ny faharetany ao amin’izay efa nanavaozan’Andriamanitra azy (teolojian’ny famoronana) ireo teo amin’ny hazofijaliana sy ny fiaimpiainany rehetra mifanaraka amin’izany no maneho izany fahamasinana izany (voatokana ho an’ Andriamanitra). Ny maha IRAY azy ireo dia mariky ny fahavelomany izay maneho ny fahamasinany (contra fisaratsarahana [decomposition] izay mariky ny fahalovana/fahafatesana). Ny fananan’izy ireo sy fiainany ny Tenin’ny fahamarinan’Andriamanitra (ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν, and. 17) (fa tsy ireo teny sandoka) no hitahiry azy ireo amin’izany fahamasinana izany (ampit. notandremany ny teninao, τὸν λόγον σου τετηρήκασιν [perfect of τηρέω: to keep watch over, to quard], and. 6, vakio koa and. 19). Andriamanitra mitahiry ny mpianany amin’ny fahamasinany amin’ny alalan’ny fanomezany azy ireo ny Teniny ó ny Mpianatra kosa dia voatahiry amin’izany mahaizy azy izany amin’ny alalan’ny fitehirizany ny Tenin’Andriamanitra. Asan’ny Fanahy Masina eo amin’izy ireo anefa no hahaizany mitahiry izany (jereo ny context: ny Fanahy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, 14:26; ampit. vokatry ny Fanahy, Gal. 5:22ff.). Ao amin’izay hitehirizan’Andriamanitra azy ireo koa anefa no hahaizany mitahiry koa izany ny tenin’Andriamanitra (ampit. ny Ray ao aminy, izy ireo ao amin’ny Ray) izay hitondra azy ho amin’ny fahamasinana izany.
Voaresaka matetika eto ny hoe “izao tontolo izao” (ὁ κόσμος, the world). ὁ κόσμος: izao tontolo izao ao anatin’ny fahalovana sy fanjakan’ny fahafatesana (izay tian’Andriamanitra homena ny fiainana mandrakizay na tiany ho foronina vaovao indray, ampit. 3:16). Ny tsy handresen’izany “izao tontolo izao” sy ny maha izy azy izany intsony ny mpianatra izay vokatry ny hazofijaliana izany no angatahan’i Jesosy amin’ny Ray eto: (τηρήσῃς [aorist subj. of τηρέω: to keep watch over, to quard] αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηρου, hiaro azy amin’ny ratsy/izao tontolo izao ao anatin’ny faharatsiany, and. 15). Ny faharetan’ny mpianatra amin’izany fahamasinany izany koa anefa dia act missiologique izay ataony amin’izao tontolo izao (ampit. and. 18; Mat. 5:13–14).
Efa nandray ny fanavaozan’Andriamanitra teo amin’ny hazofijalian’i Kristy isika rehetra. Aoka haharitra ao Aminy àry dia hanahaka Azy amin’ny fahamasinan’Andriamanitra koa isika ary dia ho fitaovana missiologique mahomby eo am-pelatanany eto amin’izao tontolo izao koa. Ho Azy irery anie ny voninahitra. Amena.